#Xog:Muxuu Salka Ku hayaa Safarka Hogaamiyaha Soomaaliya Ugu Socdaalayo Addis Ababa - Get Latest News From Horn of Africa
#Xog:Muxuu Salka Ku hayaa Safarka Hogaamiyaha Soomaaliya Ugu Socdaalayo Addis Ababa
By axadle On Mar 4, 2019 Last updated Mar 30, 2019
Madaxwaynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa lagu wadaa in uu Talaadada Berri ah uu socdaalo magaaladda Addis Ababa ee caasimada Ethiopia, sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan Madaxtooyada.
Farmaajo ayaa la kulmi doona Ra’iisul wasaare Abiy Axmed, kaasoo ay kawada hadli doonaan sida la sheegay xaalada kusoo kordhay gobolka Geeska Afrika oo bilooyinkii u dambeeyay isbedalo badan uu ka socday.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in Madaxwaynaha Eritrea uu qayb ka noqonayo kulanka.
Madaxweyne Isias Afwerki iyo Abiy ayaa maanta tegay South Sudan, halkaasoo ay kula kulmeen madaxda dalkaasi, oo ugu horeeyay Salva Kiir.
Safarka madaxwayne Farmaajo ayaa kusoo aadaya iyada oo dhowaan uu Addis Ababa tegay madaxwaynaha Kenya, Uhuru Kenyatta, kaasi oo wadankiisa ay xiisada kala dhaxeyso Soomaaliya.
Khilaafka labada wadan ee deriska ah ayaa salka ku haya muran dhul-badeed, halkaasoo la sheegay in ay qanni ku tahay noocyo kamid ah saliida iyo Gaaska.
Kiiska ku saabsan murankaasi ayaa horyaala maxkamada cadaalada aduunka ee ICJ, taasoo la filayo in dabayaaqada sanadkaan ay kasoo saarto xukunka lagu kala saarayo labada dal, iyadoo wareegii 1aad ay Soomaaliya guuleysatay.
Intii uu ku sugnaa gudaha Itoobiya, Kenyatta ayaa la yeeshay Abiy Axmed wadahadalo ay ku xoojinayaan cilaaqaadka dhinaca ganacsiga, iyagoo saacado kadib u dhoofay wadanka Eritrea.
Hogaamiyaasha saddexda dal ayaa isku raacay in ay yeeshaan Iskaashi saddex goosaad ah oo ku aadan dhinacyada; dhaqaalaha, amniga iyo nabada, kaasi oo aanay qayb ka ahayn Soomaaliya.
Xukuumada Muqdisho ayaa soo dhaweysay Iskaashigaasi, inkasta oo aanan la ogeyn in safarka Farmaajo uu daaran yahay arrinkaasi, wallow Madaxtooyada aysan wali ka hadlin.
Waa safarkii 6aad oo uu Madaxwayne Farmaajo ku aado dibadda tan iyo bishii lasoo dhaafey, waxaana madaxda sare ee DF kordhiyeen sanadkan socdaallada dhaqaalaha badan Ku baxa